Lammiiwwan Itoophiyaa lama Aafrikaa Kibbaa keessatti ajjeefaman - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Siyaasa Addunyaa Lammiiwwan Itoophiyaa lama Aafrikaa Kibbaa keessatti ajjeefaman
Lammiiwwan Itoophiyaa lama Aafrikaa Kibbaa keessatti ajjeefaman
sababni ajjeechaa Afrophobia ta'uu isaati kan himamu
Lammiiwwan Itoophiyaa lama naannoo magaalaa Daarbanitti kan ajjeefaman rasaasaan. Sababni ajjeechaa jibbaa namoota biyya alaa ‘afrophobia’ ta’uu hinoolle jedhama. Namoonni lubbuu isaanii dhaban Geetaachoo Phaawuloosiifi Dassaaleny Daani’eel ta’uunis beekameera. Kanniin ajjeefaman lameenuu namoota gurgurtaa meeshaa addaddaa irratti bobba’an turan.
Wiliyaams Michunuu, miseensi koree nagaa Inchangaa, sababni du’a namoota kanaa guutummatti jibbaa lammiilee biyya alaan wolqabata jechuuf ammatti wonti mirkanaaye kan hinjirre ta’uu ibsa. Akka Wiliyaamsitti du’a isaaniitiif woldorgommiin daldalaas sababa biraa akka ta’uu malu dubbata.
Mootummaan biyyattii balaa du’aafi saamichaa lammiilee biyya alaa Aafrikaa Kibbaa keessa jiraatan irra yeroo heddu gahu rakkoo jibbaati jechuu irra yakka woliigalaa jechuu filata.
Baatii darbe keessa naannoo Suweetootti haleellaa lammilee biyyoota Aafrikaa biraa irraa dhufan irratti xiyyeeffateen namoonni 6 ajjeefamanii dukkaanni 100 ol saamamuu isaati kan burqaan oduu garagaraa gabaasan.
Perezidaantiin biyyattii Jaakob Zumaan rukuttaafi haleellaa lammiilee biyya biraa irraa dhufanii Aafrikaa Kibbaa keessa quphatan too’annaa jala oolchuuf dhaadateera.
lammiileen itoophiaa ajjeefaman
Previous articleAyvoorikoost waancaa Aafrikaa 30ffaa harkatti galfatte
Next articleKompitaroonni boruu waan kiisa kaayatan ta’uuf deema jedhama